Gigaset GX290: endri-javatra, famaritana ary vidiny | Androidsis
Gigaset dia marika alemanina izay mazàna tsy dia misy eo amin'ny sehatry ny finday avo lenta, saingy ananantsika eto izany ary omentsika azy ny anjara asany lehibe amin'ity fotoana vaovao ity satria vao nanomboka ny Gigaset GX290, fantsona fampisehoana antonontonony izay misongadina indrindra amin'ny fizakan-tena lehibe arosony noho izy mitondra bateria mahazaka hafahafa.
Ny famolavolana an'ity finday ity dia zavatra miavaka amin'ny endri-javatra hafa ao aminy. Misaotra an'io sy ireo toetra rehetra atolotray azy, hifaninana mivantana amin'ireo orinasa toa ny Energizer sy Blackview ao amin'io sehatra io ihany izy ireo.
1 Gigasp GX290 endri-javatra sy famaritana
Gigasp GX290 endri-javatra sy famaritana
Ity fitaovana vaovao ity dia miaraka a Sarimihetsika diagonaly 6.1-inch miaraka amin'ny vahaolana HD + 1,560 x 720 teboka, mari-pana miendrika rano mitete iray ary vera Corning Gorilla Glass 3 izay mahatohitra azy amin'ny fikoropahana, ny gorodona ary ny fanararaotana hafa.
Ny Gigaset GX290 koa dia mirehareha amin'ny hery rehetra ananan'ny Helibola Helio P23 avy any Mediatek Izy io dia afaka manome sy mampita fahatsiarovana anatiny 32 GB miaraka amin'ny fanohanana ny fanitarana amin'ny alàlan'ny microSD. Na izany aza tsy naseho ny fahatsiarovan'ny cipher an'ny RAM, ka zavatra hianarantsika avy eo.
Android Pie amin'ny fanjakany madio dia mihazakazaka eo amin'ny terminal, raha toa kosa ny fanamarinana IP68 dia manolotra fanoherana rano. Mandritra izany fotoana izany, Mametaka bateria 6,200 mAh miaraka amina fanohanana mamaly haingana izay mamerina anao amin'ny làlana 0% ka hatramin'ny 100% ao anatin'ny telo ora monja. Izy io koa dia mampiasa ny haitao famandrihana tsy misy tariby, noho izany dia tsy ilaina ny mampifandray azy amin'ny socket hitazomana ny fiampangana.
Ny safidin'ny fifandraisana dia misy ny tarika roa 802.11 a / b / g / n Wi-Fi (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 4.2, seranan-tsambo USB-C 2.0 manohana OTG, A-GPS, ary NFC. Ny fanekena endrika sy ny mpamaky ny rantsantanana dia tsy eo amin'ny telefaona, ary koa fakan-tsary miverina indroa misy MP 13 sy 2 ary mpitifitra eo anoloana 8 MP.
Ny vidiny raikitra amin'ity smartphone ity dia 299 euro tsy anisany VAT.. Ny vidiny, miaraka amin'ity singa farany ity, dia tokony ho 360 euro eo ho eo. Mbola ho hita eo izay tsena ahatongavany, saingy efa afaka mangataka izany i Espana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Gigaset GX290 no finday avo lenta vaovao misy bateria monster 6,200 mAh
Ny Realme 5 dia mandray fitsangatsanganana Geekbench miaraka amin'ny Snapdragon 665